Nhau - Covid-19 Yakaunza Kwakakura Kukanganisa Uye Kwayedza Kune Iyo Global Retail Indasitiri
Covid-19 Yakaunza Kwakakura Kukanganisa Uye Kwayedza Kune Iyo Global Retail Indasitiri
Muhafu yekutanga ye2020, kubuda kwechimbichimbi kweECVID-19 kunoisa iyo yepasi rose yekutengesa indasitiri, kusanganisira yeindasitiri yezvipfeko, kune simba guru uye kuyedza. Pasi pehutungamiriri hwakasimba hweCPC Central Committee, mamiriro ekudzivirira denda nekudzora muChina akaenderera mberi nekuvandudza, kugadzirwa uye hupenyu hupenyu hwadzoserwa nekukurumidza, musika wevatengi wakaramba uchidzikama, uye vatengi zvishoma nezvishoma kwakawedzera kuda kwavo uye kuvimba mukushandisa. Kubva muna Ndira kusvika Chikumi muna 2020, China yekutengesa yekutengesa zvinhu zvevatengi yakazara 17.23 trillion yuan, ichidzika pasi 11.4% pagore uye 7.6 muzana inonongedza isingasviki pane iyo mukota yekutanga. Pakati pavo, zvigadzirwa zvekutengesa zvakasimudzwa zvakatsiga. MunaJune, kutengesa kwekutengesa kwakadzoserwa kusvika ku 3 trillion yuan panguva imwecheteyo gore rapfuura. Kudzoreredzwa kwakawedzeredzwa, musika wevatengi wakaramba uchisimudza zvakatsiga, uye vatengi vakawedzera kuda uye kuvimba kuvimba Kubva muna Ndira kusvika Chikumi muna 2020, China yekutengesa yekutengesa zvinhu zvevatengi yakazara 17.23 trillion yuan, ichidzika pasi 11.4% pagore uye 7.6 muzana inonongedza isingasviki pane iyo mukota yekutanga. Pakati pavo, zvigadzirwa zvekutengesa zvakasimudzwa zvakatsiga. MunaJune, kutengesa kwekutengesa kwakadzoserwa kusvika ku 3 trillion yuan panguva imwecheteyo gore rapfuura.
Mukuona kwemamiriro ezvinhu akaoma kunzwisisa, zvipfeko zvichiri kukosha muhupenyu hwezuva nezuva. Isu tagara takaomerera mukuvandudza kwekunze mitambo yemitambo Kusiyana nezvipfeko zvevakuru, vatengi vanozotarisa zvinhu zvakaita sekunyaradza, mhando, mhando, uye kuzadza kana uchitenga zvipfeko zvevana, kwete "zvakanaka chete". Izvi zvinodaro nekuti vana vari muchikamu chekukura uye vane zvinodikanwa zvepamusoro zvehembe dzepedyo, izvo zvinofanirwa kuona nyaradzo pasina kukuvadza hutano。
Kambani yedu ndeyekunze yekutengesa kambani ine vanhu vakuru zvekupfeka zvipfeko uye zvipfeko zvevana sezvinhu zvinotungamira, zvisina mvura uye zvinofema machira akasununguka, basa rakanakisa, dhizaini dhizaini dhizaini. Tinotenda zvakasimba kuti "hapana chakanakisa, chiri nani chete", uye kurarama zvinoenderana sarudzo uye kuvimba kwemitambo yekunze